कैसे अविस्मरणीय blowjob बनाउन को लागि?
यो मानिस खोज्न गाह्रो छ कि मौखिक गर्भपतन मन नपर्ने तर धेरै महिलाहरु डराउँछन् कि उनी सफल हुँदैनन् र प्रयोग असफल हुनेछन्। स्थिति ठीक गर्न, यो अविस्मरणीय उजुरी कसरी गर्ने भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, एक व्यक्ति निश्चित रूपमा प्रयासको प्रशंसा गर्नेछ र खुशीमा प्राप्त भएकोमा धन्यवाद प्राप्त हुनेछ।
कसरी राम्रो तरिकाले एक मान्छे अविस्मरणीय blowjob बनाउन को लागि?
सुरू गर्न, तपाईंले सबै डर र आत्म-संदेह छोड्नु पर्छ। प्रशिक्षणको लागि, तपाईंलाई एक सहायकको आवश्यकता पर्दछ, जसको लागि केला वा पर्दा उपयुक्त छ।
कसरि अविस्मरणीय blowjob बनाउन को बारे मा सुझाव:
तीनिहरु को निरंतर नमी को सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, किनभने हात सजिलै संग स्लाइड गर्नु पर्छ। तपाईं यसलाई आफ्नो मुखको साथमा निस्क्न सक्नुहुनेछ, लव हो, वा विशेष स्नेहक प्रयोग गर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि पुरुषको सम्मान एक धेरै संवेदनशील अंग हो, त्यसैले तपाईंले सबैलाई सावधानीपूर्वक यथासंभव गर्न आवश्यक छ। तीव्र आलोचना नगर्नुहोस्, डिक माथिको नचिलो नदिनुहोस् र कुनै पनि मामलाले काटिन सक्दैन।
एक व्यक्तिलाई अविस्मरणीय उजुरी कसरी बनाउने भनेर पत्ता लगाउने, म यस्तो अल्पसंख्यक उल्लेख गर्न चाहन्छु, पहिलो नजरमा, नुनान्स-आँखा सम्पर्क। बलियो यौन प्रतिनिधिको प्रतिनिधिले आफूलाई अत्यन्त आनन्दित बनाउँछ, साझेदारका कार्यहरू हेर्दै।
तपाईं विभिन्न चिप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, मुखमा एक जोश क्यूब वा टकसाल कैंडी लिनुहोस्। एक अविस्मरणीय अनुभव र एक बुखार दिनुहोस्, जसको लागी एक अप्ठ्यारो बेलामा न्यानो चियाको एक पोत लिनु पर्छ।
तथ्याङ्कहरूको अनुसार, धेरै जना पुरुषहरू समय समयमा समय प्रक्रिया गर्न मन पराउँछन्, उनीहरूको साझेदारका हातहरू चल्छन्।
टेबुलहरूको बारेमा नबिर्सनुहोस्, जुन तपाईं आफ्नो हातले मात्र होइन, तर तपाईंको मुखले फ्यान गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई लुकाउन सकिन्छ, चिसो, आदि।
अब हामी अविस्मरणीय उजुरीको प्रविधि विश्लेषण गर्नेछौं, जुन अभ्यासमा सबै सुझावहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ। यो छेउमा अवस्थित हुन सिफारिस गरिएको छ मानिसबाट, त्यो माथि माथि थियो। पुरुष सदस्यको सबैभन्दा अधिक संवेदनशील भाग टाउको हो, त्यसैले यसले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो भाषा द्वारा कारवाही हुन सक्छ, तिनीहरूलाई एक सर्कलमा, आठ बनाउन, र patting आंदोलनहरू पनि गर्न सक्छन्। यो एक लामो समयको लागि यो गर्न महत्त्वपूर्ण छैन, किनभने मानिस असम्भव महसुस गर्नेछ। त्यस पछि, आफ्नो मुर्गाले आफ्नो होंठ पकडाउनुहोस् र फिसिङ गतिहरू माथि / तल बनाउनुहोस्। तपाईं आफ्नो हातमा आफैलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यो उल्लेखनीय छ कि पूर्णता को चोटी एक सदस्य को पूरा निगलना हो, तर यसले प्रशिक्षण चाहिन्छ। सामान्यतया, एक उचाइ विसर्जन र मुक्ति संग सामान्य सेक्स जस्तै हुनुपर्छ। यो मान्छे कहाँ समाप्त हुनुपर्छ भनेर निर्धारण गर्न बाँकी छ। यदि केटीले शुक्राणुको स्वाद स्वीकार गर्दैन वा उनी चुरोट गर्न डराउँदैन भने, साझेदारले यो गर्न सक्छ, उदाहरणको लागि, उनको स्तनमा।
आपातकालीन गर्भनिरोधकहरूको मतलब
ब्रिजको प्लास्टिक सर्जरी
संभोग कसरी अनुकरण गर्ने?
कामुक सपनाहरूको सपना के हो?
कम्सातुरामा कति धेरै हुन्छन्?
महिलाहरु को लागि यौन शिष्टाचार को नियम
महिला लिगोडो कसरी वृद्धि गर्ने?
कितने क्यालोरीहरू सेक्ससँग जलाइन्छ?
सार्डिन्स - नुस्खाको साथ Mimosa सलाद
स्मार्ट आकस्मिक शैली
25 वर्षसम्म तपाईको बहिनीलाई के दिनुहुन्छ?
महिला लियो, पुरुष ध्रुवीय - संगतता
गहना कसरी बनाउने?
स्नर्स कसरी व्हाइट गर्ने?
कलमका साथ Uggs
डोमिनोइन कसरी खेल्न - खेलको नियमहरू
ब्रोंकी लोक उपचार बाट स्पाटम कसरी प्राप्त गर्ने?
डप्लग गर्भवती के हो?
स्कर्टलेट जोहानसनले भावनालाई पक्कै दिए
दाँत दुखाइको लागि लोक उपचार - छिटो प्रभाव
जवान महिला दसैं हो
फैशन भित्री - शरद ऋतु -2015 2016-2017
Furunculosis - उपचार
वजन घटाने को लागि एलएसएस